Apple inoburitsa Beta 2 yeIOS 16 ye iPhone | Nhau dze iPhone
Apple inoburitsa iOS 2 Beta 16 ye iPhone
Kuvandudzwa kweIOS 16, iyo inoshanda sisitimu inosvika kune vese vashandisi veIOS neiPadOS mukati mechikamu chekupedzisira cha2022 uye isu pa iPhone News tiri kuongorora zvakadzama kukuudza nhau dzayo dzese.
Kubudirira kwechimwe chinhu chakakosha hakumirire, kunofamba zvishoma nezvishoma asi chokwadi, uye zvingave sei neimwe nzira, Apple yakaburitsa iOS 16 Beta 2 yevashandisi vane iyi vhezheni yakaiswa kune vanogadzira vanozokwanisa kugadzirisa zviri nyore.
Zviri pachena, pamwe chete neIOS 16, iPadOS 16 Beta 2 ichasvika, iyo yaunogona kuisa pamwe chete newatchOS 9. Zvisinei, dzimwe nhau dzine chokuita neMacOS Ventura dzichafanira kumirira.
Parizvino, iOS 16 Beta 2 yakanyatso batanidza kuzivikanwa kwe "captcha" izvo zvinozotitendera kuti tisvetuke izvi zvinoshanda sezvo sisitimu ichizotiziva isu sevashandisi otomatiki uye saka isu hatizofanirwa "kuzvigadzirisa" kuti tipinde pawebhu peji kana chikuva chatinofarira.
Zvichakadaro, nhau dzinogumira kune system optimization. Tinokuyeuchidza kuti iyo iPhone inopisa zvakanyanya nekuiswa kweBeta iyi uye, senguva dzose, inokanganisa kuzvimiririra kwechigadzirwa.
Kuti uvandudze kuburikidza neOTA (Pamhepo) iyo iOS 16 Beta ingoenda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Software Gadziridza uye ichaonekwa yega.
iOS 16 Beta 2 inogona kuiswa pamidziyo inotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 16 » Apple inoburitsa iOS 2 Beta 16 ye iPhone
Telegraph inopa sarudzo dzayo dzekubhadhara pasi peiyo Premium chiyero